वन फल स्मूदी - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
वन फल चिकनी
यो गर्मीमा मैले रातो जामुनको साथ बिभिन्न व्यंजनहरू तैयार गरेको छु। यदि म रातो फल लिन मा मेरो रुचि को कारण स्वीकार गर्दछु, म तिमीलाई भन्दछु कि डाक्टरले मलाई तिनीहरुको सेवन गर्न सल्लाह दिएको थियो, मलाई भएको एक सानो पिसाब संक्रमणको कारणले र उसले मलाई भन्यो कि रातो फलफूल PH सुधार गर्न सहयोग गर्नुहोस्। सत्य यो हो कि यो मेरो लागि एकदम राम्रो भयो र आज सम्म म ती प्रकारका समस्याहरूबाट ग्रसित छैन।
मैले पहिले नै केही अन्य नुस्खामा उल्लेख गरेझैं, मैले रातो जामुनका केही जमेको झोलाहरू फेला पारे र यस पटक मैले यसलाई तयार पारें। स्मूदी यो धेरै धनी बाहिर आउँछ र एक हो फल उपभोग गर्ने धेरै प्राकृतिक तरिका। मेरा छोरीहरूले यसलाई राम्रो मौसमको लागि खाजाको रूपमा मन पराउँथे, कि धेरै चोटि तपाईले केहि नखानुको सट्टा आफैलाई हाइड्रेट गर्नु हो।
यो शेक ती व्यक्तिहरूले लिन सक्दछन् ल्याक्टोज असहिष्णु, तपाईले सोयाबीनको लागि दूध र दहीलाई सजिलै बदल्न सक्नुहुन्छ। यो सेलियाकहरूका लागि उपयुक्त, अण्डाको प्रोटिनलाई असहिष्णु र मधुमेहका बिरामीहरूलाई पनि मिठाईको लागि चिनी परिवर्तन गर्ने नुस्खा हो।
1 वन फल चिकनी
तातो दिनमा स्नैक्सको लागि एक धनी विकल्प।
Oz०० ग्राम स्थिर जामुन
हामीले सिसा र चिनीमा चिनी र बेरी राख्यौं Seconds० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति।।
त्यस समय पछि हामी दही र कार्यक्रम थप्दछौं १ मिनेट, प्रगतिशील गति -1-१०।
समाप्त भएपछि हामीले दूध र नोजल मार्फत दूध थप्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 15।
थप जानकारी - गुलाबी अनानास र बीट स्मूथी
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: पेय पदार्थ र जुस, Celiac, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ 15 मिनेट भन्दा कम, गर्मी रेसिपी, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » पेय पदार्थ र जुस » वन फल चिकनी
सिल्भिया, प्रत्येक चोटि जब म तपाईंको ब्लगमा यस प्रकारका रेसिपीहरू देख्छु, म रातो जामुन किन्न चाहन्छु ... यो राम्रो देखिन्छ र मलाई थाहा छ म तिनीहरूलाई माया गर्छु!
खुसी शनिवार सुन्दर!
यो एक धेरै साधारण नुस्खा हो, तर यो धेरै राम्रो छ र यी फ्रिज गरिएको झोलाहरू कत्ति सहज छन्, त्यहाँ प्रतिरोध गर्ने कोही पनि छैन। एनिमेट र तपाइँ मलाई भन्नुहुनेछ।
नमस्ते सिल्भिया, स्मूदी राम्रो देखिन्छ। यस गर्मीमा मैले बेरीको शरबत बनाएको छु! पूर्ण सफलता! म "अल्दी" मा गएँ (जुन मेरो शहरमा भेट्टाउन सक्ने एक मात्र ठाउँ हो) र मैले यसलाई मिठाईको लागि तयार गरें। समस्या बीउको थियो, अब मलाई शंका छ कि तिनीहरू पनि शेकमा छन् कि छैनन्, किनभने तिनीहरू दाँत र दाँतको बीचमा रहन्छन् ... र सत्य यो हो कि तिनीहरू धेरै कष्टप्रद छन्। के त्यहाँ कष्टप्रद साना बीउहरूलाई कुचल्ने, हटाउने, घटाउने तरिका छ?
म यो सबै भन्दा माथि बच्चाहरूको लागि भन्छु, शुरूदेखि नै म तपाईंलाई भन्दछु कि मेरो लागि कम्तिमा म यो प्रयास गर्दैछु।
के म पहिलो चरणमा के गर्दछु sec 45 सेकेन्ड वा १ मिनेटको गति -1-१० कुचल्न, र यसरी बीउ पल्वर हुने छ। हाम्रो विशेषज्ञले के सोच्छन् हेरौं!
Jessie, के म यहाँ देख्न बाट, विशेषज्ञ तिमी थियो। मलाई यो मन पर्छ, धेरै राम्रो विचार !! सायद यदि हामी the-१० को प्रगतिशील गतिमा एक मिनेटको लागि पहिले चिनी र रातो फल कुच्यौं भने हामी त्यो हासिल गर्नेछौं कि ती बीजहरू धेरै कम देख्न योग्य छन्। यद्यपि म तपाईंलाई सत्य बोल्दछु, मैले उनीहरूसँग पहिले नै अभ्यास गरिसकेको छु र तिनीहरूले मलाई धेरै सताउँदैनन्। तर यस तरिकाले दश हुनेछ। तपाइँ दुबैलाई धन्यबाद।
उनीहरूले मलाई ब्लूबेरीलाई पनि सल्लाह दिए र अब म जाममा खाँदा पनि सकिन्छ। तिनीहरू मूत्र संक्रमणको लागि उत्तम छन्। म स्मूदी प्रयोग गर्ने गर्छु जुन धेरै राम्रो देखिन्छ।
सिल्भिया, म तपाईंलाई एलेनाको ब्लगको बारेमा सोध्न चाहान्छु। म तपाईको प्रवेश गर्थें र हप्तामा उनीहरु (मेरो थर्मोरसेटास) मा प्रवेश गर्थें तर केहि दिन म भित्र जान सक्दिन किनकि केहि अरु बाहिर आउँदछ। कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्, मलाई यो साँच्चै मनपर्‍यो। धन्यबाद
हेलो लोरेना, पुन: प्रयास गर्नुहोस्, यो अझै अस्थायी समस्या थियो
नमस्ते सिल्भिया, तपाईको ब्लगका लागि धन्यबाद, म सँधै यसलाई अनुसरण गर्दछु र म जान्न चाहन्छु एलेनाको नयाँ ब्लग के हो भनिन्छ ... धेरै धेरै धन्यबाद।
धेरै धेरै धन्यवाद। एलेनाको नयाँ ब्लगलाई मेरो थर्मोरसेटास भनिन्छ।
मैले भर्खर यस पृष्ठ पत्ता लगाए र मलाई यो मन पर्थ्यो, त्यसैले म आफ्नो परिचय दिन्छु; म मार्गा हुँ, मसँग मेसिन धेरै वर्षदेखि आएको छ, तर सत्य यो हो कि मैले आफूसँग भएका पुस्तकहरूबाट व्यञ्जनहरू हटाएँ, योसँग कसरी खाना पकाउने भनेर मलाई चिन्ता लागेको थिएन। म यो समूहको भाग हुन चाहन्छु।
धन्यवाद र अंगालो।
स्वागत मार्ग, यहाँ हामी यसको लागी रहेको छ, हामीलाई हाम्रो थर्मोमिक्सको साथ पकाउन हजार विचारहरू दिन। मलाई आशा छ कि तपाइँ हाम्रा रेसिपीहरू मनपराउँनुहुन्छ र तिनीहरूलाई राम्रो प्रयोगमा राख्नुहुन्छ।
AAhhh मैले बिर्सें, त्यहाँ ला Sirena मा स्थिर बेरीज छन्। म यसलाई पनि प्रयास गर्छु।
मारी कारमेन फर्नांडीज डे ला Calle भन्यो
म सँधै यो पृष्ठ प्रविष्ट गर्दछु र मलाई यो मनपर्दछ, बधाई छ। मेरो प्रश्न यो हो, यदि मैले स्वीटनरको साथ गरेको छु भने कति एक्सो र स्किम्ड लेक्से हुन्छ, यो पनि राम्रो बाहिर आउँदछ, सही, धन्यवाद
मारी कारमेन फर्नांडीज डे ला Calle लाई जवाफ दिनुहोस्
हामीले रेसिपीमा 150 ग्राम पाउडर स्वीटनर चिनी राखेका छौं, यो 15 ग्राम हुनेछ र यसलाई स्किम्ड मिल्क वा सोया वा "ल्याक्टोज-फ्री"सँग बनाउन कुनै समस्या छैन ताकि यसलाई सबै प्रकारका मानिसहरूले लिन सक्नेछन्। असहिष्णुता संग।
मैले यसलाई राम्रो त्रेनरले तनाव दिएँ र यो धेरै राम्रो भएको छ, तर मैले यसमा बढि दुध राखेको छु! ,,,,,, यो धेरै स्वादिष्ट छ
यो साताको अन्त्यमा यो भइरहेको छैन कि म यो वन फलो स्मूदी बनाउँछु, यो महान हुनु पर्छ।
साथै तपाईंलाई भन्नुहोस् कि मैले तपाईंको ब्लग फेला पारेको छु र मलाई त्यहाँ व्यंजनहरू छन् कि तपाईंले मलाई काट्नु भयो। बधाई छ केटीहरु रेसिपीहरू राख्छन् त्यहाँ राम्रो छ। म सम्पूर्ण परिवारलाई मोटाईमा जाँदैछु। बार्सिलोना बाट एक ठूलो चुम्बन
मार्था एल इरजो भन्यो
के तपाईं सोया दूधको साथ बेरी स्मूदी बनाउन सक्नुहुन्छ?
मार्था एल इरजोलाई जवाफ दिनुहोस्
मार्था, मैले अहिलेसम्म यो नुस्खा बनाएको छैन, तर म हिम्मत गर्दछु कि हो, समस्या बिना नै म दिनको समयमा सोया दूध पनि प्रयोग गर्छु।